सूचना पाटी विनै आयोजनाको काम हुन्छ, सूचना कसरी पाउने ? – गोर्खा संसार
सूचना पाटी विनै आयोजनाको काम हुन्छ, सूचना कसरी पाउने ?
गोर्खा संसार२०७६, २७ फाल्गुन मंगलवार २१:३७
फागुन २७, गोरखा ।
पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं. ७ को केन्द्र बिरुवाटार बजार तनहुँको नयाँपुलबाट करीब साढे ३ किलोमिटर को दूरीमा पर्दछ । यस बाटोको स्तरोन्नती गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । करीब ७ किलोमिटरको ग्राबेल गर्ने सो बाटोको काम मध्ये हालसम्म करीब साढे ३ किलोमिटर को दूरीमा काम भइसकेको छ । अहिले भइरहेको गतिमा काम गर्ने हो भने करीब ४,५ दिनमा काम सकिन्छ । तर अहिलेसम्म कहिँ कतै पनि यसको बारेमा सूचना पाटी राखिएको छैन ।
त्यस्तै गरी सोही वडाको आहालेवरमा १३० परिवारका वसोबास गर्न मिल्ने गरी विशाल भवन निर्माणको कार्य पनि शुरु भएको छ । यहाँ काम शुरु गरेर करीब १ बर्ष काम रोकिएर फेरी काम शुरु भएको हो ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण परियोजनाको बजेटबाटै काम भइरहेको यस आयोजनाको निर्माणस्थलमा पनि शुरुमा सूचना पाटी राखिएको भए पनि अहिले काम पुन शुरु भएपछि भने सूचना पाटी राखिएको छैन ।
नगरपालिका तथा वडाका २, ३ लाखको योजनामा पनि सूचना पाटीविना काम गर्न दिईंदैन र फरफारक गर्ने क्रममा कठिनाइ हुने गरेको स्थानीय उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले बताउँछन । यहाँ त लाखौ, करोडौंको योजनामा पनि सूचना पाटी राख्न नपर्ने कस्तो कानुन हो भन्छन उनीहरु ।
कुनै पनि आयोजना सञ्चालन हुँदा आयोजनाको बारेमा विस्तृत जानकारी सहितको सूचनापाटी राखेर सबैलाई जानकारी दिनु जरुरी हुन्छ । ठूला आयोजनाहरुमा त सूचना पाटी राख्नकै लागी बजेट बिनियोजन समेत छुट्याइएको हुन्छ तर सूचना पाटी नै नराखी काम गर्दा समेत कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
आफ्नो वडाका सबै विकास गतिविधीहरु नियालिरहेका वडाध्यक्ष वसन्त कुमार श्रेष्ठ समेत यस बारे अनभिज्ञ रहेको बताउनुहुन्छ । ३ लाखभन्दा माथिको कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा सूचना पाटी राख्नुपर्दछ, यहाँ किन राखिएन मलाई पनि थाहा भएन म राख्न लगाउँछु भन्ने सहज उत्तर दिनुहुन्छ वडाध्यक्ष श्रेष्ठ ।